Kaddib Guushii Copa del Rey, Muxuu Laporta Ka Yidhi Mustaqbalka Koeman Oo Halis Ku Jira & Lionel Messi? - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKaddib Guushii Copa del Rey, Muxuu Laporta Ka Yidhi Mustaqbalka Koeman Oo Halis Ku Jira & Lionel Messi?
April 18, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Joan Laporta ayaa muujiyey kalsooni weyn oo ah in kooxdiisu ay sii xajisan doonto Lionel Messi oo qandaraaskiisu ku eg yahay dhamaadka xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay kooxdaasi xalay ku guuleysatay Copa del Rey.
Joan Laporta oo dhowaan loo doortay Madaxweynaha Barcelona ayaa daawanayay Lionel Messi oo kooxda u qaadaya koobkii ugu horreeyey ee Copa del Rey ah isagoo xidhan calaamadda kabtanka ee rasmiga ah, isla markaana dhaliyey laba gool kulankii ay 4-0 ku bahdileen Athletic Bilbao.
Laporta oo warbaahinta la hadlay kaddib ciyarta ayaa yidhi: “Leo waa ciyaartoyga ugu wanaagsan dunida. Aad ayuu ugu dhegsan yahay kooxdan, waxaanan ku qanacsanahay in uu doonayo in uu sii joogo, waxaananu samayn doonaa wax kasta oo awooddayada ah si uu u joogo.”
Joan Laporta waxa oo uu ka hadlay bandhiggii uu Lionel Messi sameeyey kulankii xalay, waxaanu yidhi: “Maanta, waxaynu aragnay in ciyaartoydu garab taagan yihiin. Waxay ciyaareen kubbad fiican.
Koobka Copa del Rey ee Barcelona ay xalay ku guuleysatay, waa midkii koowaad ee madaxweyne Joan Laporta oo dhowaan la doortay iyo koobkii ugu horreeyey ee kooxdu ku guuleysato muddo laba sannadood ah.
Joan Laporta oo hore Barcelona guulo badan usoo gaadhsiiyey intii u dhaxaysay 2003 illaa 2010 oo uu ahaa Madaxweynaha kooxda, waxa uu sheegay in koobkan xalay ay qaadeen uu yahay bilowga guulo waaweyn oo ay kooxdu gaadhi doonto.
Ugu dambayntii waxa uu soo qaaday tababare Ronald Koeman oo isagana mustaqbalkiisa la sheegayo in uu halis ku jiro, waxaanu Joan Laporta yidhi: “Koeman iyo kooxduba si fiican ayay u shaqaynayaan, waanan ku faraxsanahay.”